I-STYRIAN GRAND PRIX 2021 YEXESHA LOKUQALA E-UK | UNGAYIBUKELA NJANI KUMABONWAKUDE KUNYE NOKUSASAZA BUKHOMA-IRADIO TIMES - IBHOLA EKHATYWAYO
Liliphi ixesha le-Styrian Grand Prix 2021? Ungayibukela njani kumabonwakude-ukuziqhelanisa, ukufaneleka, ishedyuli yomdyarho
Ikhalenda ye-F1 2021 iyaqhubeka nokusondeza ngokugqwesileyo emva kwemidyarho esixhenxe, kunye ne-Styrian Grand Prix isetelwe ukwenza umdlalo omninzi kule mpelaveki.
I-Formula 1 isentloko iya e-Austria ngeempelaveki zokubuyela umva umva, kwaye abalandeli baya kuba nomnqweno wokubona imidyarho emibini yokumisa ukwakha kwiGrand Grand Prix enomtsalane, eyabona uMax Verstappen esandisa inkokheli yakhe kwindawo ephezulu yomqhubi.
U-Lewis Hamilton ukhokele uhambo olude lomdyarho, kodwa iqhinga elibalaseleyo likaRed Bull labakhuphisana ngokuchasene nabadlali babo njengoko uSergio Perez wayedlala indima yakhe ekubambeni iMercedes ngaphambi kokuba uMax Verstappen aqhaqhe ipakethi yokuhlutha uloyiso kuHamilton ekufeni.
Bukela iStrrian Grand Prix bukhoma kwi-Sky Sports F1
Kwakungobunye ubungqina bokuba iMercedes ayinakoyiswa, kwaye iRed Bull izakuhamba ixesha elide kumlo wobuntshatsheli womqhubi kunye nomakhi.
UValtteri Bottas wasala ekhathazekile kwakhona, njengoko wawukhuphela umsindo wakhe kwiqela ngokungamameli ingcebiso yakhe yokuba ugqatso luya kufuna iindawo ezimbini zokumisa. Uya kuzimisela ukutshintshela ukukhathazeka kwakhe kumboniso onamandla kwixesha elizayo.
Kwenye indawo, uSebastian Vettel ubeke olunye utshintsho olugqwesileyo ukugqiba ithoba, ngelixa uMcLaren duo uLando Norris noDaniel Ricciardo bagqiba isihlanu kunye nesithandathu ukuphawula inkqubela phambili kwiqela elisekwe eWoking.
RadioTimes.com ikuzisa isikhokelo esipheleleyo kwi-Styrian Grand Prix 2021 kubandakanya imihla, amaxesha kunye neenkcukacha zeTV, kunye nohlalutyo olukhethekileyo oluvela kumhlaziyi we-Sky Sports F1 Crofty phambi kwalo lonke ugqatso.
Iphi i-Styrian Grand Prix?
I-Styrian Grand Prix iyaqhubeka NgeCawa nge-27 kaJuni 2021 .
Jonga ngokupheleleyo Ikhalenda yeF1 2021 Uluhlu lwemihla kunye nemidyarho ezayo.
Liliphi ixesha uStrian Ukuqala kweGrand Prix e-UK?
Umdyarho uqala nge Mbini pm NgeCawa ye-27 kaJuni 2021.
Sifake ishedyuli epheleleyo yeempelaveki, kubandakanya ukuziqhelanisa kunye namaxesha afanelekileyo apha ngezantsi.
Ishedyuli yeStyrian Grand Prix
NgoLwesihlanu we-25 kaJuni (ukusuka nge-10 kusasa ukuya phambili Imidlalo yezulu F1 )
Ziqhelise 1 - 10:30 kusasa
Ziqhelise 2 - 2pm
NgoMgqibelo nge-26 kaJuni (ukusuka nge-10: 45 kusasa ukuya phambili Imidlalo yezulu F1 )
Ziqhelise ngo-3 - 11 kusasa
NgoMgqibelo nge-26 kaJuni (ukusuka nge-1pm ukuya phambili Imidlalo yezulu F1 )
Ukufaneleka - 2pm
NgeCawa nge-27 kaJuni (ukusuka nge-12: 30 ngokuhlwa ukuya phambili Imidlalo yezulu F1 )
Ugqatso - 2pm
Uyibukela njani iStrrian Grand Prix kwiTV
I-Styrian Grand Prix iya kuhlala emoyeni Imidlalo yezulu F1 .
Zonke iintlanga ziya kuboniswa ngokuqhubekayo Imidlalo yeSkysF1 kwaye Umnyhadala ophambili kulo lonke ixesha lonyaka.
Abathengi besibhakabhaka banokongeza amajelo ngamanye nge- £ 18 ngenyanga okanye ukongeza iphakheji yezemidlalo epheleleyo kwisivumelwano sabo nge- $ 25 nje ngenyanga.
Uhlala njani ukusasaza iStrrian Grand Prix kwi-intanethi
Abathengi beMidlalo yeSky abakhoyo banokuphila ngokobuhlanga ngokusebenzisa i-Sky Go app kwizixhobo ezahlukeneyo.
Ungayibukela iGrand Prix ngeNGOKU Ubulungu Bosuku nge- $ 9.99 okanye a Ubulungu benyanga I- £ 33.99, yonke ngaphandle kokutyikitya isivumelwano.
NGOKU kungasasazwa ngekhompyuter okanye ii -apps ezifumaneka kwii-TV ezininzi, iifowuni kunye neengcebiso. NGOKU ikwafumaneka ngeBT Sport.
Ukujonga kwangaphambili kweStyrian Grand Prix
Ndikunye nomhlaziyi we-Sky Sports F1 uDavid Croft
I-DC: IVerstappen inemoto ekhawulezayo, ekhawulezayo ethe yazisa ukuzola ngayo. Uyazi ukuba ukuba akayifumani okokuqala, mhlawumbi unethuba lesibini lokuza nakwi-Styrian Grand Prix. Akunyanzelekanga ukuba angxame ngokuhamba anokukwenza ngaphambili kwaye angafumani nto.
Sibona uMax Verstappen oqolileyo, uqhuba ngokuqaqambileyo. Sibona uVerstappen owaziyo ukuba uneqela lakhe lokumnceda eligxile kwingqondo kancinci.
Uyonwabile ngaphandle komkhondo kwaye ungatsho xa uthetha naye. Uyindoda eyonwabileyo ebomini bakhe, kwaye ndicinga ukuba oko kuyahambelana nobomi bakhe bobungcali. Unento yonke ayifunayo ngaphandle kwesihloko esikwingxowa. Kwaye ujonge ukukhuphisana indlela ende eya kwisizini.
Iimpawu ezoyikekayo zeFerrari?
I-DC: Ilizwi malunga noFerrari, owayenexesha elibi eFrance. Siza kufumanisa okuninzi kule mpelaveki. Ukucinga ngemiyalelo emitsha malunga namavili esicinga ukuba sonke siza kunceda okanye sithintele iRed Bull, kuba basilele eBaku. Ndiyazibuza ukuba ingaba i-Ferrari lelona qela liye lathintelwa kakhulu yile nto, bejonge ukunxiba kwabo amavili kwimpelaveki. Kwakungalunganga. Unoloyiko lokuba uFerrari uza kuba nesantya esihle kakhulu ngeli xesha lonyaka, kodwa uza kulwela ugqatso olushushu, ejonge kwinto oyibonileyo.
Makhe sibone ukuba yintoni uFerrari anokujika kwiRed Bull Ring.
Ngubani owuthandayo umzila?
I-DC: Yindlela ebaleke kakhulu yokubaleka ngaphambili, bendidiniwe ukuphela kwayo. Kwaye kuphela ngumkhondo omfutshane. Ziikhilomitha ezi-2.6 kuphela ubude, ineekona ezili-10 kuphela, kwaye kwezi kona ezinye zazo azizizo ncam kwaphela.
Iyakhawuleza kwaye ii-curbs zohlwaya. Ndicinga ukuba kufanelekile i-Red Bull njengoko imoto yabo ibonakala ingcono kolu hlobo lomkhondo ohambayo, kodwa ngaphambili oku khange kube yeyona track inkulu yeRed Bull kwaye baye bazabalaza kwi-turf yabo yasekhaya kancinci.
Ukuba ujonge enye into oza kuyibukela, jonga eyethu Isikhokelo seTV ngu okanye undwendwele indawo yethu yeMidlalo.
isikhululo sokudlala umdlalo 5 odolo kwangaphambili
sivule i-tennis live stream 2018
ungabukela i-ofisi yebhokisi kwi-sky go
777 intsingiselo yokomoya
idragon fruit ukusika ayikhuli
ukubona inani 777